Shuggie Bain Akụkọ nke Douglas Stuart
"Onye dike bụ onye ọ bụla nke na-eme ihe ọ nwere ike ime," Romain Roilland kwusiri na amamihe niile dị n'ụwa na-arụtụ aka. Ma ọ dị ntakịrị ihe anyị chere na nwatakịrị nwere ike ime iji nwetaghachi nwata ya. N'ihi na ịnwụ nwa bụ ihe na-ekwekọghị n'okike ebe nne ma ọ bụ nna nwụnahụrụ n'oge na-adịghị anya bụ ihe na-emebi emebi.
N'akụkọ a, otu nne na-efunarị n'ime labyrinth ahụ nke mbibi onwe ya, nke ịla n'iyi dịka ọ dị mkpa. Ọ dịghị onye ga-agwa Agnes na o kwesịrị ibuli isi ya ma weghachite ndụ ya, dị ka nnọkọ dị ọnụ ala enyemaka onwe onye. Ọ dịghị onye ma e wezụga nwa nwoke isi ike nke olileanya ya nwere ike iru nke kacha nta na nke kachasị ime, ọbụlagodi, ihe ọ nwere ike ...
Na mbido XNUMXs, Glasgow na-anwụ: obodo na-egwuputa ihe na-enwebu ọganihu ugbu a site na amụma Thatcher, na-eme ka ezinụlọ banye n'enweghị ọrụ na nkụda mmụọ. Agnes Bain bụ nwanyị mara mma na nke na-enweghị isi bụ onye na-arọ nrọ mgbe nile inweta ndụ ka mma: ụlọ mara mma na obi ụtọ nke na-adịghị akwụ ụgwọ na nkeji nkeji.
Mgbe di ya, onye na-anya tagzi na onye na-achọ nwanyị, gbahapụrụ ya ọzọ, Agnes hụrụ onwe ya naanị ya n'aka ụmụaka atọ nọ n'otu agbata obi jupụtara na nhụsianya na ndakpọ olileanya, na-emikpu n'ime olulu mmanya na-enweghị njedebe. Ụmụ ya ga-eme ike ha niile ịzọpụta ya, ma, manyere onwe ha ịga n'ihu, ha ga-emecha nyefee onwe ha n'otu n'otu. Ihe niile ma e wezụga Shuggie, nwa nwoke nke ọdụdụ, naanị onye jụrụ inye aka, onye na-eme ka Agnes jiri ịhụnanya na-enweghị atụ na-efegharị.
Shuggie, bụ́ nwatakịrị nwere mmetụta ọmịiko, onye nwere àgwà na nke na-enupụ isi, na-anwụrụ na ụmụ ndị na-egwuputa ihe na-achị ya ọchị nakwa na ndị okenye na-akpọ ya "iche," ma onye isi ike dị ka ọ dị, o kwenyesiri ike na ọ bụrụ na ọ nwaa ime nke ọma na ọ ga-abụ. nwee ike ịdị ka "nkịtị" dị ka ụmụ nwoke ndị ọzọ ma nwee ike inyere nne ya aka ịgbapụ n'ebe a enweghị olileanya. Onye meriri ihe nrite Booker a ma ama, Akụkọ Shuggie Bain bụ akwụkwọ akụkọ dị nro ma na-agbawa obi banyere ịda ogbenye na oke ịhụnanya, akụkọ nke, site na ọmịiko ya na-ele anya na mgba na-egbu mgbu nke nwanyị megide iri ahụ, nkụda mmụọ na owu ọmụma, na-eguzo dị ka ụtụ na-akpali akpali maka okwukwe na-enweghị mgbagha nke nwa nwoke kpebisiri ike ịzọpụta nne ya. na ụgwọ niile.
Ị nwere ike zụta akwụkwọ akụkọ "History of Shuggie Bain", site na Douglas stuart, Ebe a:
Tags Douglas stuart, Novelties na akwụkwọ akụkọ, Akwụkwọ akụkọ dị egwu